Google Home Hub waa isbedelka Mini iyo Home, laakiin leh shaashad | Androidsis
Manuel Ramirez | | Noticias, Kiniiniyada Android
Google Home Hub waa wax soo saar cusub oo ka socda G weyn oo doonaya inuu horay ugu socdo noqo isbedelka Google Home ama Google Home Mini. Tani waa fikradda ugu weyn ee loogu talagalay Google Home Hub, ama waxaad mooddaa kiniin yar oo salka la saaray si aad ula macaamili karto codkaaga.
Google Home Hub waa midka hadda loo tilmaamay maareynta dhammaan qalabka ku xiran gurigaaga. Nest waa mid ka mid ah kumanaanka alaab ee la bilaabi doono iyo in badan oo maanta la heli karo si aad u maamusho.
Hal qalab oo lagu xakameeyo qof walba
Iyada oo Google Home Hub aan ku heli karno warar kale oo ah Sawirada Google: albumyada tooska ah. Marka laga reebo xaqiiqda ah in sirdoonka macmalka ah ee Sawirada ay raadinayaan sawirada ugu fiican si ay kuu tusaan ka hor shaashadda cabbirka weyn ee Google Home Hub.
In kasta oo waxa ugu xiisaha badan ee xaruntan cusub ay tahay la falgalaan "isaga" iyada oo loo marayo Kaaliyaha Google. Waxaa loo qaabeeyey si sax ah si codkaagu u noqdo kanaalka isdhexgalka iyo, sida ku dhacda taleefannada iyo aaladihii hore, iyo shaashadda cabbirka dhexdhexaadka ah, waxay na tusaysaa fiidiyowyo, websaydhado iyo wax kasta oo aan ku baran jirnay markii aan ka raadineyno Google.
Google wuxuu ku darayaa alaab kale oo loogu talagalay guriga taasna waxay ku biireysaa Google Home iyo Google Home Mini. Caqli ahaan Hubkan Home ayaa leh rafcaan weyn mawduuca shaashadda. Sida weyn ee G ku muujiyey tusaale ahaan, waxaan noqon karnaa cajiin rootiga ah inta aan ka raacayno casharka fiidiyowga ee ka socda YouTube; dhammaantood adigoon taaban shaashadda adoo adeegsanaya codkeenna si aad ula falgalaan Home Hub.
Google Home Hub wuxuu diyaar u yahay inuu horay u sii dalbado $ 149 iyada oo bilaash ah YouTube-ka bilaashka ah ee 6-bilood ah. Haddii aad raadineysay inaad iibsato Google Home, hadda iibsigu wuxuu si toos ah ugu socdaa Hub Home.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Google Home Hub, ama Kaaliyaha Google ee gurigaaga ayaa ku dhex jira kumbuyuutar